uMvelisi wezibane zesitalato | UkuKhanya kweBeier
Okukhethekileyo kwimveliso yezibane zesitalato zelanga, izibane ze-LED kunye neeseli zelanga
Customized Solar Street Light abavelisi abavela eChina
Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd. Customized Solar Street Light abavelisi abavela eChina, bamkele ngokufudumeleyo bonke abathengi ukuba basityelele nanini na.
Ukukhanya kwesitalato saseGadini Uyilo olubini lokutshatyalaliswa kobushushu bomzimba wesibane
1. Uyilo lokutshatyalaliswa kobushushu obubini bomzimba wesibane. I-aluminiyam eyodwa yokushisa i-sink kunye nomqhubi, i-hollow heat sink yonyusa ukuhamba komoya.2. Izikhewu ezidityanisiweyo zedinki yobushushu kwindawo yokungenisa umoya.3. Ifanelekile kumdlalo ovalelweyo.4. Uphumelele uvavanyo lwe-segue ye-voltage ye-6000v ephezulu, ukukhusela isibane ngcono.5. Ukukhanya okuhle kwe-LED kunye ne-130lm / w, isiqinisekiso se-lm80.6. Ngaphezulu kwe-15% ye-LED xa kuthelekiswa nebhalbhu yombona jikelele kwimarike.7. Uyilo olungaphantsi kwabalandeli kunye newaranti yeminyaka emi-5.8. Iringi yesangqa kwisibane ingenziwa ngokwezifiso umbala njengesicelo.9UL/CUL/DLC/CE/ROHS/FC/LM80 isiqinisekiso.10.IES iifayile ezikhoyo.
Isibane seNtendelezo Ukukhanyisa kunye noyilo lwesekethe, uyilo lweCAD yemoto
1 Inkonzo yezisombululo zokukhanyisa: Ukukhanyisa kunye noyilo lwesekethe, i-auto CAD layout2 Isibane esiLuminous Flux(lm):39003 CRI (Ra>):704 I-Engile yoMtha (°):1205 Ubushushu bokusebenza(℃):-20 - 506 Ubomi bokusebenza (Iyure): 50000I-7 ye-Lamp Body Material: I-Aluminium Alloy, i-High-pressure die-casting Aluminium8 IP Umlinganiselo:IP65Isiqinisekiso se-9: CCC, ce, CQC, RoHS, SASO, UL10 Indawo yeMvelaphi: Jiangsu, China11 Igama leBrand:beler12 Inombolo yoMfanekiso:2020LSL03013 Isicelo:Igadi, Umbala wePali yokuKhanya14 Umthombo wokukhanya:LED15 Iwaranti (Unyaka):3-UNYAKA16 Ubonelelo lwaMandla:AC17 Igama leMveliso:Isitiya esikhokeleyo selanga esikhokeleyo ukukhanya ngaphandle kwamanzi18 Amandla esibane:30W-6019 Ukuphakama:3-5M20 Ukukhanya kombala: 3000k ~ 5500k21 Ipali yokuKhanya: Idiphu eshushu intsimbi22 Imilo yePali yokukhanya:Yenzelwe wena23 Igama elingundoqo:ukukhanya kwegadi24 Ukusebenza okukhanyayo (lm/w):13025 i-Input Voltage(V):220
1 Inkonzo yezisombululo zokukhanyisa: Ukukhanyisa kunye noyilo lwesekethe, i-auto CAD layout2 Isibane esiLuminous Flux(lm):39003 CRI (Ra>):704 I-Engile yoMtha (°):1205 Ubushushu bokusebenza(℃):-20 - 506 Ubomi bokusebenza (Iyure): 50000I-7 ye-Lamp Body Material: I-Aluminium Alloy, i-High-pressure die-casting Aluminium8 IP Ukala:IP65Isiqinisekiso se-9: CCC, ce, CQC, RoHS, SASO, UL10 Indawo yeMvelaphi: Jiangsu, China11 Igama leBrand:beler12 Inombolo yoMfanekiso:2020LSL03013 Isicelo:Igadi, Umbala wePali yokuKhanya14 Umthombo wokukhanya:LED15 Iwaranti (Unyaka):3-UNYAKA16 Ubonelelo lwaMandla:AC17 Igama leMveliso:Isitiya esikhokeleyo selanga esikhokeleyo ukukhanya ngaphandle kwamanzi18 Amandla esibane:30W-6019 Ukuphakama:3-5M20 Ukukhanya kombala: 3000k ~ 5500k21 Ipali yokuKhanya: Idiphu eshushu intsimbi22 Imilo yePali yokukhanya:Yenzelwe wena23 Igama elingundoqo:ukukhanya kwegadi24 Ukusebenza okukhanyayo (lm/w):13025 i-Input Voltage(V):220
Siza kukubonelela ngoluhlu olupheleleyo lweenkonzo.
● Ukuba abathengi abafaki okanye balungise, sinikezela ngeenkonzo zokulungisa kwisayithi.
● Sibonelela ngezothutho elwandle kunye nothutho lwemoto.
● Ukuba abathengi abafaki , sibonelela ngesikhokelo esikude nakwisiza.
● Senza konke okusemandleni ethu ukunceda abathengi kwaye sihlangabezane neemfuno zabo.
● Iintengiso zethu ziya kunika iinkcukacha zento oyifunayo kunye nexabiso elifanelekileyo.
● Sine-CE.ISO.CCC.RoHS kunye nezinye izatifikethi ezigunyazisiweyo.
Sinikezela ngesikhokelo sofakelo/sokugcinwa kude nakwinkonzo yesiza
Iinjineli eziziingcali kunye neqela lentengiso le-one-stop solu-tions kunye namava angaphezu kwama-20 eminyaka
Silandela intsebenziswano yokuphumelela kunye nentsebenziswano yexesha elide
Sifumene izatifikethi ze-CE, ISO, CCC kunye nezinye ezigunyazisiweyo
I-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.
Isekwe kwi-1993 kwaye ise-Yangzhou, e-China, i-Beier Lighting ngumvelisi ohamba phambili kunye nomkhulu wokukhanya kwesitrato selanga, ukukhanya kwesitrato se-LED, izindlu ze-LED kunye nebhetri yelanga, iphaneli yelanga kunye nenkqubo yelanga. Sisebenzise amalungelo awodwa omenzi wechizi angaphezu kwamashumi amabini, kwaye safumana iziqinisekiso ze-ISO9001:2000, ISO14001, CE, SGS njlnjl. Ulwazi lwethu, amava, kunye nokuqaliswa kwezinto ezintsha okuthe gqolo kukhokelele kwimpumelelo yezigidi zenkqubo yokukhanyisa ngaphandle efakwe kwimarike yasekhaya neyehlabathi.
Wamkelekile ngokufudumeleyo ukutyelela umzi-mveliso wethu kwaye nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi!
Izigidi zenkqubo yokukhanyisa yangaphandle efakwe kwimarike yasekhaya neyamazwe ngamazwe.
Intshayelelo yeProjekthi yesibane seepali eziphakamileyo zeBala iJiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.
I-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd. Intshayelelo kwiprojekthi yesibane sesitediyamu esiphezulu iJiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd., Bamkele ngokufudumeleyo bonke abathengi ukuba basityelele nanini na.
Abavelisi boHlelo lokuKhanya lweBeier olulungiselelweyo abavela eTshayina
Intro yeCase of Beier lighting administration Edition Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd., Lonke uvavanyo lomgangatho luyafumaneka kumzi-mveliso wethu.
Intshayelelo yolawulo lokukhanyisa eBeier kwiprojekthi yesibane sengalo ephindwe kabini iJiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.
Intshayelelo yolawulo lokukhanyisa eBeier kwiprojekthi yesibane sengalo ephindwe kabini. I-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.,Ufakelo lweSiza esikhokelayo luyafumaneka kubo bonke abathengi.
China Beier ukukhanyisa Hubble landscape abavelisi beprojekthi yesibane-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.
I-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd. I-China Beier yokukhanyisa i-Hubble landscape isibane abavelisi beeprojekthi zeprojekthi-Jiangsu Beier Lighting Electrical Co., Ltd.,Ufakelo lwesiza esikhokelayo luyafumaneka kubo bonke abathengi.